Gilberto: “Waxaan rabaa inuu Wenger sii joogo Emirates.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Gilberto: “Waxaan rabaa inuu Wenger sii joogo Emirates.”
Gilberto: “Waxaan rabaa inuu Wenger sii joogo Emirates.”
Posted by: radio himilo May 10, 2017
Muqdisho – Laacibkii hore ee Arsenal, Gilberto Silva ayaa sheegay in Macalin Arsen Wenger uu gar u leeyahay qaadashada go’aankiisa ah goortii uu ka dhaqaaqi lahaa naadiga.
Mustaqbalka Wenger ayaa noqday mid uu mugdi hareeyay dhawaanahan – iyada oo heshiiska macalinkanina uu ku eg yahay dhamaadka ol’olaha socda. Wararka qaar ayaa sheegaya in Wenger loogu deeqayo heshiis laba sano ah oo uu lasii joogi doono Arsenal.
Guushii 2-0 oo ay Man United ka gaareen ayaa rajadii ay ka qabeen booska afaraad ee kala horreynta horyaalka soo ifisay, waxaana lagu wadaa inay Wembley isku helaan Chelsea iyaga oo wada ciyaari doona finaalaha koobka FA Cup-ka.
Gilberto oo Arsenal kula guuleystay laba jeer koobkan iyo horyaalka England PL markii uu ku sugnaa naadiga xagaagii 2003-2004, wuxuu xumaan u dareemaya sida loola dhaqmi karo heshiiska Wenger kaas oo taageerayaasha qaar kala kulmay dhaleecayn iyo doonis la’aan.
“Waa wax murugo leh inaan aragno sida dadka qaar ula dhaqmayaan – yacni in laga diro naadiga kadib 20 sano oo uu Arsenal iyo ciyaaraha England kasoo shaqeynayay,” ayuu yiri Gilberto.
“Way fiicnaan laheyd waqtiga uu go’aansado inuu ka dhaqaaqo. Taasina waa go’aanka weyn ee isaga iyo kooxda kawada dhaxeeya.”
“Taasina waa in loo maraa waddo uu isagu u qalmo.”
Mar la weydiiyay aragtidiisana, Gilberto wuxuu yiri: “Waxaan rabaa inuu sii joogo.”
Kooxda fadhisa booska lixaad ee Arsenal, ayaa lix dhibcood ka hooseysa kooxda Manchester City oo booska afaraad ku jirta – iyada oo ciyaar ay Southampton la dheeli doonto Arbacada ay baaqi u tahay.
Next: Dhageyso: Warbixin kororka dhaqaatiirta Ajnabiga ah ee kusoo badanaya dalka.